Vaovao Mafana · Mey, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Mey, 2010
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Mey, 2010
Thailandy 22 Mey 2010
Avy amin'ny twitpic-n'i wassayos Tsy handefitra ny Praiminisitr'i Thailand Abhisit Vejjajiva, amin'ny nanomezany didy ireo miaramila ny mba hanohizana ny fidinana an-tsehatra manosika ireo mpanohitra avy any amin'ny Lobaka Mena. Manisika mafy i Abhisit fa ho famerenana ny fitoniana ao an-drenivohitra no mampahery vaika ny fanosehana ny mpanohatra. Manameloka ny ampahany...
Madagasikara: Nipoaka ny fifandonana teo amin'ny tafika sy ny mpitandro ny flaminana tsy mitovy hevitra
Madagasikara 22 Mey 2010
Tamin'ny 20 May 2010, dia nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana mpifanandrina izay naharitra ora iray tao an-drenivohitr’ i Madagasikara, Antananarivo. Ity krizy ara-politika mitohy ity dia mbola nahitana herisetra indray, araka ny voalazan'ny Croix rouge dia olona telo no naratra nandritry ny fifandonana (fr). Vondron”olon-tsotra an-jatony tohanan'ireo...
Arabia Saodita 17 Mey 2010
Mitady ny fomba rehetra hanajanonana ny ranobe vokatry ny orana nivatravatra tany Riyadh androany ny mponina any Arabia Saodita. Misy bilaogy manokana natsangana hanangom-baovao avy amin'ny twitter sy ny YouTube, miaraka amin'ny vaovao farany ao amin'ny twitter sy sary mihetsika navoaka tao amin'ny sita YouTube. Mitondra ny lohateny hoe ny...